Thawng Ṭha Thang NC: Believers Church Myanmar Nih Rakhine Ram Le Paletwa I A Ummi Missionery Hna Caah Bawmhnak Ks. 15,750,000 Kan Pek Lai – Chin World News Evening
June 5, 2020 Salai Van Chin News
Rakhine ram iaum mi BC Missionaries hna caah facang tun 269 (a tangka in 9,415,000), khrihfabu dang le private missionaries hna caah tun 181 (a tangka in 6,335,000) kan pek hna lai. Kan pek nak ding khua hna cu Ann, Minbya, Maybonne, Kyaukdaw, Paletwa, Sami hi an si. Hi bantuk in kan ti khawh tawk pekchanh khawhnakakan petu Pathian cung ah kan i lawm.
Gospel for Myanmar Program caah Believers Church Myanmar he kuttlai in rianatuantu WUPM, Metropolitan le kan hruaitu Bishop CK No Chhum cung ah kan i lawm. Rakhine lei kan hruaitu Bishop Dr. Tial Hmung nih meetingakan telpi caahatlamatling khun.
🚩ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ပလက်ဝမြို့နယ်ရှိ အမှုတော်ဆောင်များအတွက် ကျပ်ငွေ ၁၅,၇၅၀,၀၀၀ လှုုန်ဒါန်းခြင်း
ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ်မှ BCM အမှုတော်ဆောင်များအတွက် ကျပ်ငွေ သိန်း ၉,၄၁၅,၀၀၀ တန်းဖိုးရှိ ဆန်အိတ် ၂၆၉၊
အခြားသောအသင်းတော်နှင့် ပုဂ္ဂလိကအမှုတော်ဆောင်များအတွက် ကျပ်ငွေ သိန်း ၆,၃၃၅, ၀၀၀ တန်ဖိုးရှိ ဆန်အိတ် ၁၈၁, စုစုပေါင်းဆန်အိတ် ၄၅၀ ကို ပေးအပ်လှုုဒါန်းသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ပေးပို့လှူဒါန်းသွားမည့် မြို့များမှာ အမ်း၊ မင်းပြား၊ မြေပုံ၊ ကျောက်တော်၊ ပလက်ဝ၊ စမီး စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။
Gospel for Myanmar အစီစဉ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ယုံကြည်သူများအသင်းတော် (BCM) နှင့်အတူ ပူးပေါင်းပါဝင်သည့် WUPM နှင့် ကျွှန်နုပ်တို့ ခေါင်းဆောင်ကြီး Metropolitan နှင့် Bishop CK No Chhum အား အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ယုံကြည်သူများအတွက် “Believers Church for Rakhine” အစီအစဥ်ကိုလည်း ဆက်လက်ပြုလုပ်သွားရန်ရှိပါသည်။
Chinland for Paletwa အစီအစဥ်ဖြင့် စစ်ဘေးရှောင် ပြည်သူများအတွက် လှုုန်ဒါန်းမှုများကိုလည်း လာမည့်ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းတွင် ဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ လှုုဒါန်းမှု အစီစဉ်များ အစီပြေချောမွေ့စေရန်အတွက် ဆုတောင်းပေးခြင်းဖြင့် ပါဝင်ပေးကြပါရန် မေတ္တရပ်ခံပန်ကြားအပ်ပါသည်။
Believers Church Myanmar
Zei Party In Dah Naa Cuh Lai? Zei Hmunhma Cnstituency In Dah Naa Cuh Lai? Timi Biahalnak Salai Van Bawi Lian (Martin) Nih Fiang Taktakin Lehnak A Tuah